2 Madzimambo 3:1-27
3 Zvino Jehoramu+ mwanakomana waAhabhi akava mambo waIsraeri muSamariya, mugore rechigumi nemasere raJehoshafati mambo waJudha, akaramba achitonga kwemakore gumi nemaviri. 2 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha,+ kungoti haana kuzoita sababa vake+ kana saamai vake, asi akabvisa shongwe tsvene+ yaBhaari yakanga yagadzirwa nababa vake.+ 3 Akanamatira kuzvivi zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ Haana kuzvirega. 4 Zvino Mesha+ mambo weMoabhi akava munhu anopfuwa makwai, uye airipa mambo waIsraeri makwayana zviuru zana nemakondohwe asina kuveurwa zviuru zana. 5 Asi Ahabhi paakangofa,+ mambo weMoabhi akamukira+ mambo waIsraeri. 6 Naizvozvo Mambo Jehoramu akabuda muSamariya pazuva iroro, akaunganidza+ vaIsraeri vose. 7 Akatumawo shoko kuna Jehoshafati mambo waJudha, achiti: “Mambo weMoabhi andimukira. Uchaenda neni kuMoabhi kuhondo here?” Iye akati: “Ndichaenda.+ Ndakangoita sewe; vanhu vangu vakangoita sevanhu vako;+ mabhiza angu akangoita semabhiza ako.” 8 Iye akati: “Tichaenda nenzira ipi?” Naizvozvo iye akati: “Nenzira yokurenje rokuEdhomu.”+ 9 Mambo waIsraeri namambo waJudha namambo weEdhomu+ vakaenda, vakaramba vachienda vachipoterera kwemazuva manomwe, asi kwakanga kusina mvura yokuti mauto nezvipfuwo zvavakanga vainazvo zvinwe. 10 Mambo waIsraeri akazoti: “Zvinonzwisa urombo sei kuti Jehovha akashevedza madzimambo matatu aya kuti aaise muruoko rwaMoabhi!”+ 11 Jehoshafati akati:+ “Kuno hakuna muprofita waJehovha here?+ Saka ngatibvunzei Jehovha tichishandisa iye.”+ Naizvozvo mumwe wevashandi vamambo waIsraeri akapindura akati: “Kuno kuna Erisha+ mwanakomana waShafati, aidira mvura pamaoko aEriya.”+ 12 Jehoshafati akabva ati: “Shoko raJehovha riri kwaari.” Naizvozvo mambo waIsraeri naJehoshafati namambo weEdhomu vakaenda kwaaiva. 13 Zvino Erisha akati kuna mambo waIsraeri: “Ndinei nemi?+ Endai kuvaprofita+ vababa venyu nokuvaprofita vaamai venyu.” Asi mambo waIsraeri akati kwaari: “Aiwa, nokuti Jehovha akashevedza madzimambo matatu aya kuti aaise muruoko rwaMoabhi.”+ 14 Erisha akati: “NaJehovha wemauto mupenyu+ wandinomira pamberi pake, kudai ndanga ndisina hanya naJehoshafati mambo waJudha,+ ndaisazokutarirai kana kukuonai.+ 15 Zvino ndiunzirei muridzi wechiridzwa chine tambo.”+ Zvino muridzi wechiridzwa paakangoridza, ruoko+ rwaJehovha rwakava paari. 16 Akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Mupata wose uyu une rukova ngauzare nemigero;+ 17 nokuti zvanzi naJehovha: “Hamuzooni mhepo, uye hamuzooni kunaya kwemvura zhinji; asi mupata une rukova uchazara nemvura,+ muchanwa,+ imi nemombe dzenyu nezvipfuwo zvenyu.”’ 18 Chinhu ichi chichava chiduku kuna Jehovha,+ uye achaisa vaMoabi mumaoko enyu.+ 19 Paradzai maguta ose akavakirirwa+ nemaguta ose akanaka kwazvo, temai+ miti yose yakanaka,+ vharai matsime ose emvura, uye shatisai minda yose yakanaka nematombo.” 20 Zvino mangwanani,+ panguva yokupiwa kwechibayiro chezviyo,+ tarira! mvura yakanga ichibva nechokuEdhomu, nyika ikazara nemvura. 21 Zvino vaMoabhi vose vakanzwa kuti madzimambo acho akanga auya kuzorwa navo. Naizvozvo vakaunganidza vanhu vakawanda kwazvo kubvira pazera revaikwanisa kusunga+ bhandi zvichikwira, vakamira pamuganhu. 22 Pavakafumomuka, zuva rakapenya pamvura, zvokuti vaMoabhi vaiva kune rumwe rutivi vakaona mvura yacho yakatsvuka seropa. 23 Vakatanga kuti: “Iri iropa! Chokwadi madzimambo acho aparadzwa nebakatwa, uye aurayana. Naizvozvo, haiwa imi vaMoabhi, endai munopamba!”+ 24 Pavakasvika mumusasa wevaIsraeri,+ vaIsraeri vakabva vasimuka, vakatanga kuparadza vaMoabhi zvokuti vakavatiza.+ Nokudaro vakapinda muMoabhi, vachiparadza vaMoabhi zvavaipinda. 25 Vakaputsa maguta,+ mumwe nomumwe akakanda dombo rake muzvikamu zvose zveminda yakanaka, vakazvizadza; uye vakavhara matsime ose emvura,+ vakatema miti yose yakanaka,+ kusvikira vangosiya matombo eKiri-hareseti+ chete; vanopotsera matombo nezvipfuramabwe vakarikomba, vakarirwisa. 26 Mambo weMoabhi paakaona kuti kurwa kwakanga kwamukurira, akabva atora varume mazana manomwe vaivhomora bakatwa kuti vapinde nepakati vachienda kuna mambo weEdhomu;+ asi vakakundikana. 27 Akazotora mwanakomana wake wedangwe akanga achizotonga panzvimbo pake akamupa+ sechibayiro chinopiswa parusvingo. Israeri akatsamwirwa kwazvo, zvokuti vakarega kumurwisa vakadzokera kunyika yavo.